Shaqooyinka Emirates Airlines - Shaqooyinka Global Airway - Upload CV maanta!
Emirates Airlines oo ah shirkad diyaaradeed oo leh shirkad Dubai City Company. Guud ahaan, waxaan u qoreynaa shaqooyinka bannaan ee caalamiga ah ee Airways. Tan iyo markii aad ku soo degtay boggayaga. Waa inaad soo booqataa qeybaha shirkadaheena. Akhri macluumaadkayaga shaqooyinka. Fiiri sida kooxdayada HR ay kaaga caawin karaan inaad shaqo hesho maanta. Hagaag, shaqaleyntu waa iyada oo aan la dhihin waaxda duulista ee dhakhsaha u koreysa. Dhab ahaantii way ku shaqaalaysiin kartaa. Shirkadaha ugu fiican waa oo leh wax kabadan abaalmarinta caalamiga ah ee 400 ee heer sare ah. Heerarkooduna waa adag tahay in la qaniino. Dhinaca togan, badiyaa shirkaddu ma gaadho Xaaladdan iyada oo aan ka hadlin caalamka. Tusaale ahaan shaqaale heer sare ah oo ka socda India iyo Pakistan.
Iyadoo ay ka shaqeyneyso garoon diyaaradeed ama xitaa diyaaradaha. The shaqaale cusub wuxuu baran doonaa xirfado cusub oo badan. Dabcan, dhammaantoodna waa muhiim. Sannad walba, diyaaradaha duulimaadyada ee Imaaraatka waxay maareeyayaal fuliyaan. Dhab ahaantii wuxuu u dabaaldegaa waqtiga ku soo biirista shirkadaha. Sababta oo ah tan iyo markii aad ku biirtay shirkadda. Hubi inaad calaamadiso qaab nololeedkaaga. Kaliya kaliya ma shaqeyso. Maxaa yeelay waa geeddi-socod muddo dheer ah. Tusaale ahaan rubuc kulan oo adduunka oo dhan ah. Dhinaca wanaagsan, guusha iyo kobaca la taaban karo. Tusaale ahaan, Etihad iyo Qatar Airways ayaa si aad ah u socda. Dhinaca kale, koox kasta oo ka tirsan Emirates. Bixinta warbixinno ah inay faa'iido kordho - balaayiin dhowr ah. Hore u sii soco, sanadaha soo socda.
Ku biirida shirkadaha shirkadaha ugu fiican
Miyuu xirfad la leeyahay shirkad hawadeedu u qalantaa? Qalabkoodii dhaqdhaqaaq ahaaneed ee loo yaqaan 'Emirates' ayaa kaa codsanaya? Haddii jawaabtaadu tahay haa? Waan soo dhaweyneynaa profile aad shirkadda our Dubai ee. Intaa waxaa dheer, waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad in badan ka ogaato Shirkadda Dubai City. Guud ahaan waxaa jira fursado shaqo oo xiiso badan leh. Tusaale ahaan, waad booqan kartaa Xarunta Shaqada ee Emirates Group. Oo Qaybta shaqada ee Air Arabia.
Sidaas awgeed waxaanu rajaynaynaa in aanu ku caawino. Sababtoo ah waxaan ku jirnaa heerka sare ee shirkadaha. Ka shaqeynta shirkadaha dayuuradaha. Waxaad u baahan tahay in shirkad laga helo guud ahaan si fiican u bixiso shaqo. Waxaa jira shirkado badan oo Emirates ah oo shaqaaleysiiya. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxaad ku biiri kartaa dhowr shirkadood. Waxaa jira liis ay leeyihiin shirkado aan abuurnay. Oo iyaga ayaa ku biiri doona fikrad aad u cakiran ee Job Seekers. Sida xaqiiqda xaqiiqda ah haddii aad shaqo ka hesho shirkadaha shirkadda Airlines ee bilaabi doona. Waxaanu siinaynaa shaqooyinkaan kudhisan UAE. Intaa waxaa dheer, Indonesia, Kuwait iyo xataa Singapore. Ilaa intaad ka caawineyso shirkadaha inay koraan oo ay helaan natiijooyinka.
Ka bilow Jet Airways Shaqaalaha goobta shaqooyinka
In la bilaabo shaqooyinka shirkadaha diyaaradaha ee Emirates. Ha iloobin waxaad u baahan tahay inaad yeelato waayo-aragnimo badan. Gaar ahaan kuwa Caalamiga ah shaqooyinka hawo-mareenka. Sidoo kale Bariga Dhexe iyo Aasiya. Dhanka kale, shirkadaha yurub iyo shirkadaha Maraykanka waxay bixiyaan taageero iyo tababar buuxa. Waxaan ku sheegeynaa shaqaalaha Jet Airways shaqaalaheena sida ugu dhaqsaha badan ee loo helo shaqo. Waqtigan xaadirka ah waxay leeyihiin shaqooyin yar si aad u dalbato. Wakiiladayada HR. Emirates Airlines oo ah shirkad diyaaradeed oo leh shirkad Dubai City. Waxaan xoogga u saarnaa Talo ku siinta inaad bilowdo shaqo Arte halkaas.
Jet Airways Shaqaalaha goobta shaqooyinka - Ka noqo shaqaale shirkadan!
Shirkadaha ugu Fiican ee Duulimaadka Shaqada
Air Arabia iyo Qatar, Singapore iyo Etihad
Air India iyo Shaqaalaha kabaha shaqaalaha - Shaqooyinka shirkadaha diyaaradaha ee Emirates
Keen CV si aad uhesho shaqooyinka FlyDubai iyo Kuwait Airways Careers. Intaa waxaa dheer, Singapore Airlines iyo ururo badan oo shaqaalaysiin ah. Guud ahaan marka laga hadlayo, hay'addeenna HR ayaa halkan u joogsan sidii ay kuu caawin lahayd. Iyo hel fursado shaqo oo aad u wanaagsan gobolka Gulf ama Bariga Dhexe. Waxaan haynaa meelo badan oo shaqaale ah oo caalami ah iyo madaxda sare. Sidoo kale bixinta adeegyada shaqo raadinta dadka Hindiya iyo Pakistan. On dhinaca wanaagsan iyo xitaa Qatari iyo Shaqaalaha Saudi Arabia ayaa garaacaya kooxdayada maamulka. Sidaas, fadlan boostada u soo dir shirkaddayada ama inaad kireysatid shirkadaha hoosta ku yaal oo waxaad sugto shaqooyin cajiib ah inay yimaadaan iyo bilaabi doona riyada duulimaadka. Hawlaha duulimaadyada ee shirkadda Emirates a Shirkadda Dubai City ayaa ku sugaysa!.
Ku dhaji CV ga Shaqooyinka FlyDubai iyo Kuwait Airways Xirfadaha. Waxaan halkaan u joognaa kaa caawin doona inaad hesho fursado shaqo oo cajiib ah Bariga Dhexe. Hawlaha duulimaadyada ee shirkadda Emirates ee ay la leedahay Shirkadda Magaalada Dubai ayaa hadda bilaabeysa wareysiyo toos ah. Waxaan helnaa boosas badan oo shaqo doonka ah. Sidoo kale dadka ka yimid India iyo Pakistan iyo xitaa Qatar. Boostada dib ugulaabo shirkadeena ama shirkadaha hoose.
Shirkadda Dubai City & liiska shirkadaha si ay u shaqeeyaan!
Duulimaadyadii ugu fiicnaa ee adduunka ayaa shaqeynaya!
Mid ka mid ah hay'adda ugu wanaagsan ee ka shaqeysa adduunka. Waxay u shaqaysaa shirkadaha Airlane. Dhinaca taban, ma jiraan diyaarado ugu xun adduunka. Sababtoo ah waxaan u isticmaalnaa marwalba. Marka, calaamadeeyuhu had iyo jeer wuu dhaqaaqayaa. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, ayaa shirkadeena waxaa lagu muujiyay shirkadaha duullimaadyada inay shaqeeyaan. Iyo waxa magdhow ah ama mushahar ah iyo halkaas oo aad ka heli karto wareysiyada socodsiinta. Guud ahaan marka laga hadlayo, qaar iyaga ka mid ahi waa shaqo-dooneyaal la yaab leh. Shirkado badan ayaa shaqaalaynta Bariga Dhexe.
Sidaas, waxa aad ka qaban karto qaybtan. Shirkadda lixaad ee sanadlaha ah waxay ubaahantahay qaybo macluumaad ah. Ku garaac macluumaadka muhiimka ah ee ku saabsan shirkadaha dayuuradaha shaqooyinka. Intaa waxaa dheer, iyada oo ku saleysan tayada adeegga. Qofku wuxuu hubin karaa haddii ay ku habboon tahay in shaqo lagu helo shirkadda tilmaanta leh. Dhinaca kale, waxaad arki kartaa wax qabad shaqo. Iyo halkaas oo aad ku dalban karto xitaa sida shaqaalaha Filipino. Waxaa intaa dheer, dalbashada shaqooyinka dibadda ka ah. Iyo si loo hubiyo waxa lagama maarmaanka u ah shaqada ee dhibcada guud. Iyada oo shirkadan Emirates ah shirkad diyaarad ah. Kaliya taladaada waxay shaqaaleeyaan shaqaale Ruush ah.
Duulimaadyada ugu sarreeya ee shirkadaha ugu sarreeya ayaa caddaynaya in shaqooyinka ugu wanaagsani soo bandhigaan Taas oo maskaxda ku haysa, waxaan ka hadlaynaa mushaharka. Intaa waxaa dheer, adeegga macaamiisha ayaa ah furaha ugu muhiimsan shaqooyinkan. Sidaa darteed, uma baahnid inaad bixiso CV Curyaan si aad u heshid. Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad sameyso waa uun riix sawirka. Kadib waxaad u eegi kartaa in Qatar, Kuwait iyo Singapore la wadaagaan UAE. Duulimaadyadii ugu fiicnaa ee adduunka ayaa u shaqeynaya shirkadaha Emirates Airlines. Oo waxaannu si taxadar leh u eegeynaa sida ay u socoto nidaamka meelaynta shaqada ee guud.
Howlaha ugu wanaagsan ee Airways ee adduunka oo idil!
Hoos waxaad ku haysaa shirkado gaagaaban waa inaad u dirtaa CV-gaaga. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, hoos u dhaji oo waxaad arki doontaa sharraxaad dheeri ah. Marka, Emirates airlines shaqadooda haddii ay kugu habboon yihiin adiga. Waxaad naftaada ku maarayn kartaa arjiga deg degga ah khadka tooska ah. Waxaan rajeyneyaa inaad hel natiijooyin wanaagsan at Emirates shirkadaha diyaaradaha ee shirkad Dubai Dubai. Riix hoosta magaca shirkada iyo xiriirinta arjiga.
Gacanka hawada ee Gulf
Shaqooyinka British Airways
Shaqooyinka Air Arabia
Shaqooyinka Air India
Shaqooyinka Etihad Airways
Shaqada hawada u tag
Shaqooyinka Qatar Airways
Duulimaadyada shirkadaha diyaaradaha ee Singapore
Waa maxay sababta ay qiimo u leedahay inay u dalbato Emirates Airways?
Maalmahan, dad badan oo shaqo doon ah. Raadinta shaqooyinka mushaharka sare leh. Kaliya shirkadaha ugu waa weyn ayaa bixinaya taas. Fursadaha ugu sarreeya ee 10 Emirates Airlines Careers fursadaha. Si fudud ayaa uga sarreeya $ 150,000 sanadkii. Shirkadda Magaalada Dubai ayaa waliba shaqaalaysiinaysa. Waxaa intaa dheer, waxaan halkan u joognaa inaan ku caawino. Xaqiiqdii, Imaaraadku wuu yimid oo xitaa wuu duulay Dubai. Kooxdayadu waxay sugeysaa kaa caawinaya inaad ka caawiso inaad noqotid shaqaalahooda. Sababtoo ah ganacsigooda waa inay helaan inta ugu badan ee karaankood ah. Guud ahaan hadalka, Helitaanka shaqooyin cajiib ah waxay qaadaneysaa waqti. In kabadan 80% shaqooyinka shirkada diyaaradaha. Waxaad u baahan doontaa inaad barato xirfado badan. Tusaalooyinka mid ka mid ah waa xirfadaha adeegga macaamiisha iyo maamulayaasha maaliyadeed. Iyo sidoo kale kheyraadka aadanaha. Marka boqolaal shirkadood oo suurtagal ah oo ku shaqaaleyn kara adiga ayaa u baahan doona inuu ku tababaro.
Laakiin waxaan dooran doonaa oo kaliya dhowr ka mid ah iyaga. Sababtoo ah waxaan ognahay haddii aad la socon doonto 20 ama 30. Iyo habka aad fursada ah inaad shaqo ku hesho Dubai waa sii kordhaysaa. Iyo sida aan ku dhigno shirkadaha ugu fiican. Shaki kuma jiro in midka ugu fiican uu ku saleysan yahay Bariga Dhexe. Dabcan Qatar Sacuudi Carabiya sidoo kale Mareykanka. Emirates Airlines shaqooyinka shirkada Dubai City waxay noqon doontaa heshiiskaaga ugu muhiimsan.
Nooca hab-nololeedka iyo heerka shaqada
Shaqaale macquul ah ee shirkadaha noocan ah. Waxaad abuuri kartaa dakhliyado waaweyn waxaadna bilaabi kartaa nolol yaab leh. Kaydintaada Xaqiiqdi wuu sii kordhayaa iyo nolosha maciishadeed way yaraan doontaa. Way adagtahay in la yiraahdo shirkadahee fiican. Sababtoo ah dhammaantood waxay siinayaan adeegyo cajiib ah macaamiishooda. Iyo sidoo kale shaqaalaha iyo heerka Maareynta dhaqanka shirkadaha. Marka aynu ka bilowno shaqooyinka aasaasiga ah.
Shirkadda Dubai City ee aad u gaaban gaaban shaqaalaha. Inaan ku tusno heerarka ugu wanaagsan ee ganacsiga shirkadda diyaaradaha. Laga soo bilaabo habka cusub ee maalgashadaha ganacsiga. Waxaas oo dhan waxaa loogu talagalay dadka shaqo doonka ah. Kaliya heerka ganacsigaan ayaa ah kala duwanaansho. Hoos ka daawo qaybaha kala duwan. Adiga naftaadu rajaynayso inaad sidaas yeeli doonto waxaad ogaataa wax yar oo ku saabsan ganacsiga noocan ah.
Khariidadaha Aasaasiga Ah
Waad yaabi doontaa. Ku saabsan intaad shaqaysan lahayd inta aad ka shaqeynayso shaqooyinka heerka gelitaanka. Gaar ahaan Diyaaradda shaqooyinka gawaarida. Marka, guud ahaan marka laga hadlayo, shaqooyinka aasaasiga ah ee shaqooyinka banaan ee aad heli karto waa ee ku yaal Dubai Dubai. Nadiifinta shaqooyinka, nadaafadda iyo sidoo kale adeegga macaamiisha. Oo sugitaanka macaamiisha iibiyayaashu. Sida xaqiiqda dhabta ah, shaqaalaha adeegyada aasaasiga ah ee macaamiisha ayaa wanaagsan inay tagaan. Dhinaca kale, waxaan kugu aragnaa hab yar oo wanaagsan. Waxay yihiin shaqooyinka tikidhada iibiya iyo shaqaalaha caadiga ah. Diyaarad iibineysa xafiisyada iyo maareynta xafiiska.
Tusaale ahaan, waad naftaada u heli kartaa oo bilaabi kartaa adeegga internetka. Kaliya dhinaca internetka ayaa kor u kacay. Sidaa darteed, waxaad yeelan doontaa meel wanaagsan oo wanaagsan oo shaqeynaya. Sidaa daraadeed aynu u maleyno in aad ka shaqayn karto xafiiska. Iyo muddada dheer, waxaad noqon kartaa xubin shaqaale cusub. Tusaale ahaan, bilaw inaad bixiso adeegyo aasaasi ah oo aasaasi ah. Aad u fiican fursadaha shaqo ee heerka gelitaanka shaqooyinka kirada baabuurta. Sababtoo ah hadda Airways Shirkadaha ka shaqeeya shirkadaha kale ee Turkiga.
Shaqooyinka heerarka hoose ee Suuqa
Waxaa jira in ka badan boqol adeegyo mid kastoo ka mid ah Shirkadaha aad ka shaqayn karto. Mid ka mid ah tusaalooyinka ay taasi u adeegayso dadka waawayn kiisaska intooda badani waa nooca shaqada ee shaqada. Si fudud sababtoo ah way adagtahay in la sameeyo taas oo aan qof kastaa ka faa'iideysan doonin inuu sameeyo. Nadiifi miisaska iyo qaadashada qashinka. Ama xitaa dabacda dabaqa. Taasi waa shaqooyinka aad filan kartid heerka gelitaanka. Dabcan, haddii aad leedahay waxbarasho la yaab leh waxaad ku bilaabi kartaa adoo ah tababare tababar. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, mushaharkaagu si tartiib ah ayuu u kori doonaa. Laakiin waxaad awoodi doontaa inaad awoodi karto inaad awoodo wax aad u wanaagsan. Gaar ahaan mushaharka magaalada Dubai ee Abu Dhabi. Shirkadaha duullimaadyada ee Emirates waxay la shaqeeyaan Shirkadda Magaalada Dubai oo runtii ay mudan tahay in la tago.
Shaqooyinka Maaraynta Maareynta Dhexdhexaadinta
Heerka xiga ka dib heerka dhexe ee dhexe fursadaha maaraynta. Shaqooyinka noocaas ahna, waxaad tahay xaalad caadi ah. Laakiin waad u baahan tahay si ay ugu koraan shaqooyinka Dubai. Sababtoo ah shirkadaha diyaaradaha. Aniguna waan sii kori doonaa kadibna waxaan rajeynayaa inaan koro mustaqbalka. Sidaas darteed waxay ku siin doonaan booska 4 ee sanadaha 10. Iyo kaa caawinaya inaad ku guuleysato. Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad u adeegto macaamiisha. Sababtoo ah waxaad noqon doontaa inta u dhaxaysa heerarka gelitaanka iyo maamulka sare sidaas. Waxaan u baahanahay inaan u wargaliyo boodhka agaasimayaasha. Sidoo kale maareeyayaasha kheyraadka aadanaha, maareeyeyaasha suuq geynta, agaasimeyaasha howlgalka. Dhammaan dadkaasi waxay eegi doonaan waajibaadkaaga. Adigoo kaa caawinaya inaad socodsii maalintii. Dhanka kale, dadka kaa hoos shaqeeya kormeerka ayaa looga jeedaa. Waxay u baahan doontaa inaad adigu maamuli karto. Markaa waa wakhtiyo kala duwan.
Maareeyayaasha shirkadda Airways Industries
Sidaas aynu u maleyno inaad shaqayn doonto saacadaha 8. Laba kale oo aad qaadatid mashiinka hawada ee guriga ayaa lagu abaalmarin doonaa. In ka badan 80% ee maareeyayaasha ee shirkadaha diyaaradaha. Gaarista jagooyinka heerka heerarka ku jira sanadaha 10. Sababtoo ah shirkadaha intooda badani way ku faanaan. Agaasimahan cusubi wuxuu ka bilaabmaa heerarka gelitaanka. Qaar ka mid ah iyaga ayaa xitaa tilmaamay xayaysiinta. Madaxa ku xigeenkooda. Ku bilaw kaaliyaha kiliinikada shirkadan. Sidaas darteed ha ahaato meel kasta oo aad adigu caddeyneyso. Iyo waxaa jira Waxba maaha meesha aad ka timi xitaa Pakistan. Waxaa intaa dheer, South Africa ama Saudi Arabia. Ama xitaa Filibiin dhammaan dadka fursad u leh Shirkadda Diyaaradda fursadaha shaqooyinka warshadaha.
Heerka Sare ee Xirfadaha Maamulka
Shirkado farabadan oo caalamka ah. Runtii ma bixiyaan hoy shaqaalahooda. Tikidhada diyaaradaha ee gurigooda haddii ay yihiin ajaanib. Waxbarashada carruurta. Iyo cajiib ah waxaad ku wareejineysaa nolosha. Intaa waxaa dheer, si aad u hesho ku saabsan taas oo ku siin doona laptop iyo baabuurta ciyaaraha. Sidaas darteed, shaqooyinka dayuuradaha waxay u fiicanyihiin inay tagaan oo ay istaahishaan inay sugaan. Haddii adiga beddel naftaada BMW. Ama xitaa leh Bentley. Iyo cabbirka dhexe ee guriga oo leh barkadda dabaasha. Waa in la yidhaa, qofkaasi wuu yaqaan ganacsiga. Dhanka kale, hadaad jeceshahay inaad xitaa horumarto. Maamule ama xitaa waxaa jira heer ka sareeya intaas. Waa heerka maalgashiga. Oo waxaa jira meel ay dadku dhab ahaantii ku duulaan diyaaradaha. Gawaarida dareeraha ee VIP-da iyo xitaa helikabtar gaar ah.
Shaqaalaha duulimaadka hawada iyo maamulayaasha
Sidaas darteed, haddii aad raadineyso shaqo leh hoolad dabaasha oo weyn. Iyo hab nololeed la yaab leh sida Milyaneerada. Marwalba waad joogi kartaa u gee shirkadda Dubai. Waxaa jira dhowr ajnabiyaasha shaqo ka hela adduunka. Iyo ka tagida heerka nolosha aad ufiican. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxaan ka hadlaynaa Hindida iyo Baakistaan. Markaa hadaad ka timid wadankan. Xaqiiqdii waa inaad heshaa shaqo maamul sare. Sababtoo ah dhinaca kale, haddii aad raadineyso habab ka wanaagsan oo lagu koro. Xitaa waxaad noqon kartaa tijaabo. Waxaa jira heer kale oo ka mid ah shaqooyinka maamulka sare ee shirkadaha dayuuradaha. Dhab ahaan shaqooyinka banaan ee banaan ee caalamka. Tusaale ahaan, hogaamiye sare ayaa sameeya lacago lacageed. Ama maamulaha hawlaha iyo sidoo kale maamulaha degmada. Ma labadaba lacag fiican ayay ka helayaan Bariga Dhexe? Taas, dabcan, waxay u oggolaaneysaa inay wadaan baabuur wanaagsan.
Maalgashadayaasha Ganacsiga iyo Milkiilayaasha Cirka
Qaybtaani waa qadar lacag badan. Inta badan maalgashadayaasha ganacsiga iyo milkiilayaasha shirkadaha duulimaadka ah ee ku jira bilyaneeriyaal. Dabcan, waxaa jira wax weyn kala duwanaanshaha jinsiyada. Dad badan oo Mareykan ah iyo sidoo kale Kanadiyaan. Intaa waxaa dheer, Carabtu waxay ka timid Imaaraadka Carabta. Iyadoo maalgashadeyaasha Bariga Dhexe guud ahaan. Maareynta ganacsiga noocan ah. Xitaa sarreyntiisii ​​sheekh Maxamed bin Rashiid isagoo taas qayb ka ah. Iyo dabcan lacag aad u badan ayaa ku jira ganacsiga noocan ah. Sababtoo ah soo bandhigiddeeda ganacsi ee caalamiga ah. Qof kastaa wuu ogyahay oo wuxuu sameeyaa lacag. Tirada dadka waa halkaas ka shaqeynaya waa macluumaad la soocay. Xitaa annagu garan mayno inta ganacsigan samaynayo. Kaliya boqolkiiba dadka u shaqeeya dowladda ayaa taas og hab sax ah.
Diyaaraduhu waxay samaynayaan ganacsi lacag ah
Markaa kaliya si aad u noqotid maalgaliye ganacsi nooca ganacsiga noocan ah. Waxaad u baahan doontaa inaad horey u leedahay ganacsiyo kala duwan. Dad badan ayaan xitaa garanaynin qof ahaan. Iyo hubaal inta ay le'eg yihiin kuwan dadka ayaa sameynaya. Kaliya boqolkiiba dadka loogu yeero dowladda ayaa ogtahay sida ay dhammaantood u shaqeeyaan. Marka, kaliya si aad u noqotid maalgashad ganacsiga nooca ganacsiga. Dhab ahaantii, waxaad u baahan doontaa inaad leedahay ganacsiyo kala duwan goor hore. Sababtoo ah qaab dhismeedka maalgashiga. Dabcan, ka shaqee heshiiska noocan ah. Wuxuu u baahan yahay waayo-aragnimo badan. Laakiin waxaad u baahan tahay inaad hubiso dowladda iyo cinwaannada iyo maalgashadayaasha kale ee gaarka ah taas waxaad tahay qofka saxda ah.
Emirates Group Xayeysiis ah
Kooxda Imaaraatka waa shaqaalaysiinaya shaqo doonka. Hagaag, ilaa hadda shirkadan ayaa ah shirkadda ugu weyn. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxay u fiicnaan doontaa in shaqo laga helo. Imaaraadku waa koox shirkado ah. Marka, illaa iyo inta aad dalbanayso hal mar. Waad lahaan doontaa codsigaaga oo leh dhowr shirkadood. Muddada dheer, waxay u qalantaa. Shirkadan guud ahaan waxay ku hadashaa shirkadda ugu fiican ee Imaaraadka Carabta. Xilliga aad bilowday shirkadan. Waxaad dareemi doontaa awoodda Dubai iyo saameynta Abu Dhabi ee ganacsiga.
Fly Dubai dhab ahaantii sidoo kale mid ka mid ah hay’ada horumarka. Duulimaadka flydubai guud ahaan waad kula hadli kartaa iska diiwaangelinta digniinta shaqada. Sidoo kale ku darista xogtaada shaqsiyeed. Waxaa intaa dheer, diiwaangelintaada CV. Iyo xitaa fiiri faa'iidooyinka iyo dhaqanka. Markaa guud ahaan waxaad ku hadashaa haddii aad raadineyso taageero kaalmo. Emirates shirkad diyaarad ah oo leh shirkad Dubai City waa fikir fikrad leh. Dhab ahaan, shirkadan ayaa kaa dooneysa inay ku caawiso. Intaa waxaa dheer, waana inaad sidoo kale kuugu soo dirtaa dib u cusbooneysiintaada cusub. Iyo samee qaar ka mid ah digniinta shaqada. Sababtoo ah shirkadani waxay ku dhigi lahayd waqti dheer.
No. 3 Hawada Carabiga
Air Arabia waxay bixisaa shaqooyinka xiisaha leh. The shaqooyinka ay shirkadu bixiso waa shaqooyin loo adeegsado meelo caalami ah. In kasta oo aad ka hesho xiisahaaga u fidinta shaqooyinka. Guud ahaan marka laga hadlayo, shirkad Air Arabia ayaa ku shaqaaleyn doonta. Waxaa intaa sii dheer, maareeyayaasha shirkadda HR waxay kuu rajeynayaan inaad sida ugu wanaagsan ugu shaqeyso goobiddaada. Si aad uga bilawdid waxaad u baahan tahay inaad dhagsato codso. Kadibna loo xushay mid kasta oo ka mid ah jagooyinka. Markaa, dhamaadka, waxaad dhajin kartaa badhanka Codso Hadda. Waad heli kartaa shaqada maareeyaha wareega. Sidoo kale maareeyayaasha iibka ee Saudi Arabia iyo Injineerka booska Turkiga. Bariga Dhexe ama Yurub. Emirates Airlines diyaaradaha duulimaadka leh shirkadda Air Abarbia. Xaqiiqdii waxay noqon doontaa fikrad fiican.
Shaqooyinka shirkadaha diyaaradaha ee Emirates - Xirfadaha Hawada ee Arabia
No. 4 Air India Shaqooyinka iyo Xirfadaha
Air Arabia waxay bixisaa shaqooyinka xiisaha leh. Shirkadaha shirkadu bixiyaan waa kuwa caalamiga ah ee la soo bandhigo. Intaad adiga raadso danahaaga shaqo-bixinta. Guud ahaan marka laga hadlayo, shirkad Air Arabia ah waxay shaqaaleysiisaa shaqaale cusub. Dabcan sidoo kale Imaaraadka Carabta. Shaqooyinka shirkadaha diyaaradaha ee Emirates oo ay la socoto Shirkad laga leeyahay Magaalada Dubai waa dhaqdhaqaaq caqli gal ah. Xilligan la joogo waxaad u baahan tahay inaad soo dejiso feyl. Waxaa intaa dheer, hubi qaybo macluumaad ah oo ku saabsan shaqo helitaan gaar ah. Ka dibna u codso shirkadan.
No.5 Wizz Air Shaqooyinka iyo Xirfadaha
Shirkadda Wizz Air waxay kaloo shaqaaleysiisay shirkadaha Emirates Airlines. Guud ahaan, waxay bixiyaan saddex nooc oo shaqo ah. Marka hore fursaddaada shaqo waxaad ka ogaan kartaa xitaa Poland. Fursadaha shaqaaluhu ma cabsanayaan. Dhinaca kale, waxaad yeelan doontaa shaqooyin xafiiseed. Taasi waxay noqon doontaa hawlgalka shaqaale, waaxda suuq geynta. Hubaashii shaqooyinka noocan oo kale ah badiyaa, waad ku shaqeyn lahayd waraaqaha iyo kumbuyuutarrada. Ikhtiyaarka saddexaad ee leh Wizz Air waa inuu noqdo duuliye. Guud ahaan, tani waa mid ka mid ah shirkadaha ugu fiican. Sababtoo ah duuliyayaasheeda ayaa ka duulaya magaalooyinkooda. Iyo dabcan, shirkadda waxay siisaa taageero buuxda iyo tababar xagga sharciga ah. Marka shirkada magaalada Dubai waxay kugula talineysaa inaad u codsato shirkadan. Kooxdayadu aad bay u aaminsan yihiin inay daqiiqad kasta la qaadan doonto shirkaddan. Hawlaha duulimaadyada ee shirkadda Emirates a Xirfadda WizAir website-yada waxaa wanaagsan in la bilaabo.
No.6 Xirfadaha British Airways
Shirkad kale oo loogu talagalay shirkadaha Emirates Airlines. Waqtigaan la joogo Shirkadda United Kingdom. British Airways waa shirkad wayn, shaqaaleysiisay London, Dubai iyo New York City. Sidaas, raadinaya shirkad wacan waa hab loo shaqeeyo iyaga. Shirkaddan, guud ahaan waxay ka hadashaa, shaqaalaynta garoonka diyaaradaha ee Heathrow. Ganacsiga Ingiriiska wuxuu awood u leeyahay inuu sameeyo khibrado macmiil oo xusuus mudan. Haddii astaantaada guud ay la jaan qaadi doonto baahidooda. Meel kasta oo ay ka shaqeeyaan, dhulka ama hawada. Waad haysan kartaa fursad wanaagsan iyaga la. Haddii aad khibrad u leedahay fulinta ama aad hadda ka qalin jabisay. Ama xitaa hadaad ka bilaabayso shaqada UK Waa inaad tijaabisaa shaqada British Airways.
Sidaas awgeed, kabtanka ayaa shaqaalaynaya shaqooyinka istiraatiijiga ah iyo qorshaynta shaqooyinka iyo sidoo kale maaraynta maaraynta duuliyeha iyo ganacsatada Shirkadani waxay xaqiiqdii siin doontaa fursado kobcaya oo wanaagsan oo la leh Imaaraadka Carabta. Waxay si fiican u shaqeyn doontaa Dubai iyo Abu Dhabi. Dabcan, ganacsigu wuxuu ku salaysan yahay Xarunta ganacsiga martigelinta u dhaxeysa Bariga Dhexe. Haddii aad tahay qof aad ufiirsan oo ku saabsan adeegga dadka. Shirkadan ayaa hubaal ah mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee kooxda shaqaalaha ee shaqaalaha. Waxaad ka heli kartaa shaqada sida pilot ama SFI fursad shaqo.
No. 8 Norwegian Airline Jobs
Norwey waa mid kale shirkad wanaagsan oo shaqeyneysa. Sababtoo ah ururkani wuxuu leeyahay mid ka mid ah diyaaradaha duuliyaha cusub ee adduunka. Intaa waxaa dheer, in ka badan 260 diyaarado cusub ayaa la dalbadaa. Marka, kaliya oo lagu saleynayo tirakoobkaas. Way u qalmi doontaa la xiriir wakiillada maamulka HR. Hawada Norwey ayaa maareyn doonta codsiyada dhowr boqol oo furitaan cusub oo shirkad ah mustaqbalka dhow. Tani waxay ka dhigan tahay in shirkaddu u baahan tahay dad badan si ay ugu biiraan Qoyska reer Norway. Dabcan, haddii aad tahay mid ka mid ah. Ka sii gudub oo iska diiwaangali faahfaahintaada Emirates shirkadaha diyaaradaha ee shirkada Dubai City.
No. 9 Shaqada Airline ee GoAir
Sidaas markaan waxaan dib u eegeynaa waa shirkad India ah. Shirkadani waa a shirkad aad u wanaagsan oo Hindiya ah magaceedu waa Aysal India India Limited. Waxay baaritaan u tahay kooxaha Hindiya howshooduna waa inay bixiyaan gaadiid aamin ah oo aamin ah. Dhamaan shaqaalahooda iyo macaamiishooda. Iyo waliba waqtiga oo dhan fiiro gaar ah u lahaanshaha waajibaadka iyo la macaamilka macaamiishooda. Waana ay awoodaan si loo abuuro adeeg gaar ah. Guud ahaan, dadka kala duwan iyo musharraxa shirkadooda.
Shirkad kale oo filimkayaga dib loo eegayo waa KLM tan shirkada dhab ahaantii shaqaaleysiinta macmiilaha iyo sidoo kale shaqaalaha dhulka iyo dadka khibrad fiican leh suuqgeynta. Waxaad samayn kartaa dhammaan siyaabaha guud ahaan feejignaanta shaqada oo aad shaqo ka heli karto meelo badan. Sidoo kale USA Europe Canada iyo dabcan, dabcan, waxaan leenahay. Waxaan si adag kugula talineynaa inaad isku daydo inaad shaqo hesho. Waxay noqon kartaa waa adag tahay in laga helo Hindiya iyo Pakistan. Laakiin way fududaan doontaa in laga helo Dubai iyo Koonfur Afrika iyo dabcan shaqaalaha Caalamiga ah. Waxaan helayaa shaqo oo mushahar fiican ayaa la bixin lahaa.
Hadda waa waqtiga loogu talagalay Virgin Atlantic shirkadda ugu fiican ee shirkadan bixinta fursado badan ee laga helo adeegga macaamiisha tusaale ahaan adeegyada adeegga macaamiisha xarunta adeega macaamiisha. Waxaad ka ogaan kartaa dhammaan fursadaha weyn ee ay leeyihiin. Waxaad awoodi kartaa had iyo jeer shaqo hesho ee xafiiska xafiiska. Oo ka soo jeeda maareynta maamulka, waxaad dib u eegi kartaa tan shirkadna waad shaqeyn doontaa sidoo kale ka danbeeya muuqaalada sidaas darteed haddii aad tahay qof tayo leh waxaad leedahay doorarro kala duwan. Dhinaca kale, waxaan leenahay shixnad ka socota supercars si aan khibrad dheeraad ah u wadin oo aad adiguna. Hawlgalka injineernimada oo noqon doona iyo koorsooyinka.
Dhanka kale, waxaad yeelan doontaa jago hogaamiye. shirkaddan, waxaad horseed u noqon doontaa oo abaal marin doontaa dadka iyagu is horumariya. Markaana waxaan leenahay injineernimo iyo hawlgal. Iyo guud ahaan hadalka, si aad u hesho shaqadan. Waxaad u baahan doontaa inaad haysatid shahaado injineernimo. Inta badan shaqooyinka waxaa lagu qaban doonaa London. Ka dibna waxaan leenahay duuliye iyo dad u duulaya. Tusaale ahaan, u duul duullimaadyada ugu cusbooneysiiya.
No.12 Jet Airways Fursadaha Xirfadaha
Kuwa duullimaadyada diyaaradaha ee Emirates waxay la shaqeeyaan Jet Airways. Hagaag, Jet Airways waa duulaya adduunka oo dhan. Waxaad ka heli kartaa shirkado badan oo Arkansas ah. Waana fursado badan. Tusaale ahaan, waxaad heli kartaa sarkaal sare oo ka tirsan duulista, fursadaha shaqooyinka. Sidoo kale sarkaalka kowaad. Si loo duuliyo diyaaradaha dhinaca kale waxaan leenahay maareynta dakhliga iyo sidoo kale maareynta hawlaha gudaha shirkadda. Dhinaca kale, waxaad xitaa ka heli kartaa shaqooyinka kalkaalinta. Sidoo kale hawlgalka adeegga macaamiisha.
Sidaas awgeed aan la wadaagno dhammaan shaqooyinka ay shirkadu bixin doonto. Uma qalanto si aad u hesho. Sababtoo ah xitaa haddii aad hesho booska sare. Jet Airways waa shirkad wayn. Taasi waxay ku siin doonaan fursado intaa ka sii badan. Intaa waxaa sii dheer, naftaada waad tababaran kartaa. Oo noqo xirfad maarayn sare. Marka, shirkada magaalada Dubai ee caawisa safarada. Si aad ula tacaasho dhagsii sawirka hoose. Guud ahaan hadalka, Shirkaddan ayaa kufiican shaqooyinka Mumbai. Markaa hadaad tahay ganacsade Hindi ah. Waa inaad xaqiiqdii u dirtaa shirkad CV ah.
Emirates Airlines oo ku hawlan shaqooyinka Kuwait Airways. Shirkad kale oo aan dooneyno inaan dib u eegno. Kuwa Kuwait Airways Sababta oo aad awoodid sahaminta dhaqanka shirkadaha. Intaa waxaa dheer, shirkadu waxay bixisaa shaqooyin badan oo banaan. Tusaale ahaan, boosaska guud ee shaqaalaha caalamiga ah. Sidaas soo soco haddii aad raadineyso inaad noqoto tijaabo waxaad bilaabi karto shirkadan. Dhinaca kale, haddii aad jeceshahay in aad hesho fursado shaqo maaliyadeed ama xataa Teknoolajiyada shirkadaha dhaqaalaha shaqooyinka banaan ee aad awoodid inaad shaqo ku hesho. Ugu dambeyntii waxaan haynaa shaqooyinka shaqaalaha iyo hawlgalka. xaqiiq ahaan, shirkadan waxay shaqaaleysiineysaa xitaa jagada maamulka sare. Shirkad ku taal magaalada Dubai ayaa hubaal ah inay shaqo u doondoonayso websaydhkan. Maxaa yeelay dhammaanteen waan ognahay shaqooyinka aan bixin karno. Waad kufiican tahay inaad naftaada maamusho oo aad lacag aad u badan sameyso.
No.14 Air Malta Shaqooyinka
Shirkad kale oo aan jecel nahay inaan ku soo bandhigno waa diyaaradda Malta. Shirkadani, guud ahaan waxay ku hadashaa, inay ka qorto waddan yar oo ku yaal Yurub. Laakiin waa urur weyn. Iyo guud ahaan ka hadalka aad ufiican markasta. Marka, haddii aad jeclaan lahayd inaad shirkad hesho iyo meel cusub oo lagu shaqeeyo. Isku day ururka 'Air Malta'. Aynu ka soo qaadno inaad jeceshahay Yurub oo aan ka shaqeyno Malta. Xaqiiqdii ku siinayaa bilow wanaagsan. Shirkadda magaalada Dubai ayaa had iyo jeer isha ku haysa. Si loo caawiyo dadka shaqo doonka ah waxaanan ku faraxsanahay qof kasta oo cusub. Maxaad wax ka qortaa shirkaddeenna? Ama mid kasta oo ka mid ah Waxqabadka Emirates Airlines.
No. 15 Careers ee Qantas
Xirfadlaha ee Qantas Airlines. Mid kale shirkad aad u wanaagsan oo shaqeyneysa. Iyo ma aha oo kaliya Karen Airways Airlines. Ma u wanaagsan tahay shaqaalaha, waxaa jira shirkado kale oo badan. Iyadoo maskaxda lagu hayo, shaqaaleeyayaasha doonaya inay raadsadaan inay ka mid noqdaan kooxda Qantas. Laakiin taasi ma fududa, xaaladaha badankood waxay u baahan yihiin heerarka cusub ee xubinta cusub. Ka dibna u guurto caqabado kala duwan. Shirkadan ayaa ka shaqayn doonta jawi aad u adag. Dad badan oo tartamaya oo ka shaqeeya suuqyada Airlane. Tani waa sababta ay Qantas badanaa uga filayeen shaqaalahooda. Xaqiiqda dhabta ah, maamulka ayaa filaya in ay gaaraan suurtagal la'aanta. Dhinaca wanaagsan, shirkadu had iyo jeer waxay taageertaa maamulayaasha kooxda. Tababar iyo waxbarid sida hoggaanka wanaagsan u egyahay. Intaa waxaa dheer, sida loo aamini karo loona caawiyo dadka kale ixtiraam. Hoos eeg.
No. 16 Xirfadaha Shaqada ee Aegean
Aegean corporation, shirkad kale oo loogu talagalay Emirates Airlines Careers. Guud ahaan, shirkadani waxay ka shaqeysaa heerka ugu sareeya. Hadafkoodu waa inuu yareeyo masaafada u dhaxeysa macaamiisha iyo shaqaalahooda. Waxay yihiin adigoo eegaya inaad ku soo dhawaato waxa aad rabto inaad ogaato. Dhanka kale, waxaa soo maray safarro badan iyo marinno iskuday ah oo isku dayaya in ay u fidiyaan adeegyo joogto ah oo heerkii ugu sareeyay ah. Fikradda ugu weyni waa ixtiraamka iyo horumarka suuqa. Iyaga oo sidoo kale horumarinaya shaqaalahooda iyo caawinta si ay u taageeraan la-hawlgalayaasheeda bulshada maxalliga ah.
Waxaa jira in kabadan 12 milyan oo rakaab ah tan iyo 2012. Duullimaadyada 145 meelaheedii iyo waxay sameeyaan in kabadan 1 billion Revenue. Wadamada 45. Intaa waxaa dheer 89% ururka iyo ka caawinta jawiga aaminka ah. Shirkaddu waa iskaashatada Star Alliance waxayna ku bixiyaan lacag badan Maalgashi. Marka jagooyinkaaga si dhakhso ah ayaa loo heli doonaa. Shaqaalaha soo socdana taas waa waxay noqon kartaa suurtogalnimada weyn ee sii kordhaya.
No.17 Shaqooyinka Avian Airlines
Australian Airlines sidoo kale waa ciyaartoyga ugu sareeya suuqa. Xilligan la joogo shirkad shaqaaleynaysa dhowr goobood oo shaqo. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waa aircrew iyo sidoo kale wakiilka adeegga rakaabka, tijaabada, howlaha farsamada, xafiiska madaxa iyo xitaa internship. Dhanka kale, shirkadu waxay bixisaa talooyin badan iyo tilmaamo in aad u isticmaali karto Emirates Airlines Careers. Mid ka mid ah tusaalayaasha Diyaaradaha Australiya waxay leeyihiin blog cajiib ah. Waxay dhab ahaantii wax ka qorayaan kooxdooda ku saabsan Foeterkooda iyo ku saabsan adeegyadooda iyo adeegyadooda. Dabcan, waxay u muuqataa mid cajiib ah oo hubaal ah dad badan ayaa qiimaha ka heli kara blogga. Sidaa darteed waxoogaa yar oo riix sawirka wuxuu kuu geyn doonaa boggooda. Dhab ahaan u sii soco oo codso shaqo aadna iskuday inaad shaqo ku hesho naftaada.
No.18 Shaqooyinka Koonfur Afrika Airways
Helitaanka meherad ma aha heshiiskaas fudud. Shirkad kale oo aan jecel nahay inaan dib u eegno maqaalkan. Shirkadaha Duulimaadyada ee South Afrika guud ahaan waxay ku hadlayaan shirkadan waa shirkad duulimaadyo badan ku guuleysatay. Xafiiska ugu weyn ee xaruntiisu tahay Harrisburg ee South Africa. Shirkadda u adeegeysa meerayaasha 78 meela caalami ah. Dhinaca xun ma ahan wax sahlan in lala qabsado diyaaraddaan. maadaama ay iyagu yihiin kuwa ugu wanaagsan ee la bixiyo Diyaaradda. Dad badan ayaa runtii isku dayaya si aad shaqo u hesho. Waa in aan xusuusannaa in Koonfur Afrika aysan sida ugu fudud u heli karin Visa. Sidaas awgeed waa inaad sii wadaa socotaa hal mar toddobaadkii. Isku day in aad ogaatid shaqadooda banaan. Emirates Airlines oo ka shaqeysa shirkadaha Dubai City Company si ay ugu bilawdo shirkadan.
No. 19 Lufthansa Careers
Shirkadda Lufthansa ee dhabta ah looma baahna in qof loo soo bandhigo. Dabcan mid ka mid ah ciyaartoyda ugu weyn ee shirkada dayuuradaha caalamiga ah. Xilligan la joogo shirkadan waxay leedahay taajir shaqo oo ka socota takhasuska IT si ay u xakameyso xitaa maamulka sare ee hawlaha. Maamulaha macaamiisha iyo sidoo kale kaaliyaha nadiifinta. Shirkaddan si hubaal ah, waxaad ku heli kartaa wax kasta oo shaqo ah. Dhibaatada kali ee kaliya ayaa waxaa jira wareysi aad u adag in la dhaafo. Dhinaca wanaagsan, waxaad ka heli kartaa boggooda si aad u wanaagsan. Xitaa waad xakameyn kartaa xaalka codsigaaga iyo sidoo kale xogta shakhsi ahaaneed. Xitaa xitaa shaqo-qorista ayaa u muuqata helitaanka shaqo doonka. Iyada oo tan maskaxda ku jirta, Emirates waxay diyaarad yahiin shirkad Dubai Dubai ah sababtoo ah waxaan sidoo kale diyaar kuu yahay.
Waxaan heynaa shirkadan kaliya ee ugu hooseysa liiska. Sababtoo ah waa shirkad Yurub ah sidaas darteed waa sababta ay u adag tahay si aad u hesho Visa Yurub. Dhanka togan, waxay shirkadani sidoo kale ku dhuumaneysaa Bariga Dhexe iyo Masar. Iyo dhawr waddan oo kale oo dhawr ah oo aannu xitaa awoodin inaanu hadda hubinno. Hubaashii Imaaraatka Carabta Qadar iyo Mareykanka ee Mareykanka.
No.20 Xirfadaha Singapore Airlines
Singapore Airlines maahan in dad badan ay halkan joogaan shirkadan. Laakiin shirkadani waxay leedahay horumarin xirfadeed sanadaha ugu dambeeyay ee 20. Fikradda ugu weyn waa si ay u caawiyaan shaqaaluhu inay gaaraan kobcintooda oo dhan. Maxaad ula shaqeyn laheyd adiga iyo aad u ballaaran iyo horumarin kasta oo ka mid ah bixiya shirkadani waxay kordhin doontaa xirfadlahaaga si uu kuu helo. Iyo qof kasta oo doonaya in uu la bilaabo iyaga.
Shirkadda waxay bixisaa e aqoonsi shahaadada sare. guud ahaan hadlida, hadaad raadineyso shirkad Ayaa ku siin doona kafaala qaadka fiisaha. Xaqiiqdi, Diyaaradda Singapore ayaa taas kuu samayn doonta. iyagu kuma habboona shaqooyinka shirkada diyaaradaha ee Emirates. Laakiin xaqiiqdi waxay mudan tahay in la codsado shaqo raadis ahaan. hoos ka daawo muuqaalkooda iyo adiga go'aanso naftaada haddii ay u qalanto ama aaney.
No.20 Xirfadaha Qatar Airways
Qadar oo loogu talagalay shirkadaha diyaaradaha ee Emirates shaqooyinka Bariga Dhexe. Boqolaal fursadood oo hadda ka jira Qatar. Shirkadan ayaa caan ku ah Abaaro Saacadda oo ay dhab ahaantii isha ku hayaan maamulayaasha iyo madaxa Horumarinta Ganacsigas. Kooxda mashaariicda farsamada iyo sidoo kale shaqaale hawleedyada maddaarka, shaqaalaha maraakiibta iyo shaqaalaha. Dhinaca wanaagsan ee shirkadan, waxaad xitaa ka fiirin kartaa codsigaaga. Samee wicitaanada shaqada haddii aad xiiseyneyso boosaska bannaan ee mustaqbalka. Sababtoo ah xilligan xaadirka ah ma awoodi karo inay ku siiso shaqada aad raadineyso sidii qof dumar ah.
Xaqiiq ahaan, iyagu waa kuwa keliya ee sida dhabta ah u bixiya mustaqbalka Fursadda qorshaha horumarinta xirfadeed ee websaydhka. waxaa hubaal ah inay u qumman tahay in horay loo socdo oo la dalbado ugu yaraan 50 illaa jagooyinka 200. Dhinaca taban, tani waa Qatar sidaa darteed ma ahan wax sahlan in shaqo la helo. Waxbadan dadka ku nool adduunka oo raadinaya fursad cajiib ah wadankan. Sidaas darteed waa inaad la dagaallantaa Hindida, Pakistani, iyo wakiillada kale ee Bariga Dhexe.
Gebogebada Emirates Airlines Careers
Qeybtan, waxaan qabnaa gabagabada. Sidaas darteed dadka intooda badani waxay raadinayaan inay shaqo ka helaan duulimaadka ugu degdegga badan. Guud ahaan wax badan oo shaqooyin ah ayaan ku bixiyaa sidii tijaabo iyo sheyga dhulka. Diyaaradaha Shirkadaha waxaa lagu tijaabiyaa oo si degdeg ah u ballaariyaa shabakadda. Iyo gaar ahaan shirkadaha UAE. Mareykanka ee Mareykanka iyo Yurub ilaa iyo hadda iyo sida xawliga ugu kordhaya adeegyada garoonka diyaaradaha. Xaqiiq ahaan, ganacsiga noocan ah. Waxaad ka baari kartaa shaqooyinka banaan ee laamo badan. Ilaa iyo hadda waxaad ogaatay istiraatiijiyad iyo qorsheynta shaqooyinka.
Madaarka iyo shaqooyinka shabakadda. Shaqooyinka farsamada ee farsamada iyo nooca shaqada ee la midka ah. Ammaanka garoonka diyaaradaha waa mid aad u weyn. Dhinaca kale, waxaan leenahay shaqooyin tayo leh. Qorsheynta dayactirka diyaaradaha iyo garoonka Saadka. Kadibna shaqooyinka iyo ganacsiga sidoo kale u qalantaa inay helaan. Si aad u noqoto mid gaar ah shaqooyinka ugu badan waa adeegga macaamiisha diirada saaraya. Sidaa darteed waxaad tahay shaqaale ahaan waxaad ubaahantahay inaad ka sareyso filitaanka macaamiisha Madaarka.
Shirkadda Dubai City ee shaqo doonka
Shirkadda Dubai City waxay rajeyneysaa in ay kugu aragto maqaaladayada kala duwan. Our blog waxaa inta badan loo sameeyaa Job Seekers. Illaa iyo hadda waad ogtahay shirkadaha ugu fiican inay shaqeeyaan. Waxaan rajeyneynaa, inaad codsatay dhammaan shirkadaha aan bixino. Sababtoo ah waxaan nahay shirkad shaqo raadiye iyo raadinta shaqo si ay u caawiyaan dadka kale si ay shaqo u helaan. Shirkaddayadu waxay ku taallaa Dubai. Taasina waa sababta aan u dhignay Emirates. waxaanan aad ugu faannaa ganacsigan. Intaa waxaa dheer, waxaanu ka caawinnay dhismaha dhowr magac oo adduunka ah. Sidaas, noqo mid ka mid ah badan oo shaqadayada ah Shaqaaleeyayaasha shaqo ku leh caalamka. Ilaa hadda waxaan ka caawinay Saudi Arabia shaqo doonka. Iyo sidoo kale Hindi-Pakistaan ​​oo ah lambarka koowaad. Filibiin iyo Dadka reer Koonfur Afrika oo ay wehliyaan Iiraaniyiin iyo muwaadiniin Mareykan ah.
Doonaya inaad mar kale aragto!
Shirkaddayadu aad bay ugu kalsoon tahay macaamiil walba. dhaaftay Shaqo-doonka 50,000 waxay shaqo ka heleen shirkaddeenna. Xanaaqsan qayb kasta sidaas darteed waxa aan ula jeedo taas. Mashruucu ma yahay marketing, Kheyraadka Dadweynaha, kalkaalinta, adeegga macaamiisha iyo waxbarida. Adeegyada aan bixino loogu talagalay dadka ajnabiga ah. wax kasta oo aad go'aansato nooca shaqo ee aad jeceshahay inaad ka hesho shirkaddayada. Waxaan dooneynaa inaan ku siino taas. Sidaas u sii soco oo raadso boggayaga internetka. Sababtoo ah waxaan haynaa waxyaabo badan oo kaa caawin kara. Sida shaqo raadiyaha adduunka.